Shirkad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay bilad ganacsi | Somaliska
Shirkad ay leedahay gabadh Soomaaliyeed ayaa markii labaad ku guuleysatay bilad ganacsi oo ay bixiso magaalada Stockholm. Shirkada Aman Care oo bixisa adeega daryeelka dadka waaweyn ayaa markii labaad ku guuleysatay bilada ganacsiga oo sanadkiiba mar la bixiyo. Xaflad lagu qabtay magaalada Stockholm ayaa bilada waxaa la gudoonsiiyay madaxa Shirkada gabadha lagu magacaabo Karima Tice ama loo yaqaan “Ayaan”. Xaflada ayaa waxaa ka soo qeyb galay duqa magaalada Stockholm Per Unckel.
Shirkada Aman Care ayaa lagu amaanay adeegeeda sareeya iyadoo ay shirkada ka shaqeeyaan dhowr boqol oo qof oo ku kala hadla 47 luuqadood. Shirkada Aman Care ayaa adeegeeda ka bixisa 7 magaalo oo ka tirsan Sweden.
Dhinaca kale idaacada Sveriges Radio ayaa soo tabisay in maalinta Isniinta ee nagu soo aadan lagu qaban doono Kista kulan looga hadlayo sidii Soomaalida loogu dhiiri galin lahaa aasaasida ganacsiga. Kulanka ayaa ka dhici doona goobta lagu magacaabo Jobbtorget saacadu markay tahay 18.00. Kulankaas ayaa waxaa ka hadli doona gabadha bilada ku guuleysatay ee ah madaxa shirkada Aman Care.
Koox Soomaali ah oo guul weyn ka gaadhay koobka Svenska Kupen
salaan kadib jimcaaloow goobtaas hadii aad garto dadka ha laga dhaadhacsiiyo in dadka aysan ganacsi sameen karin oo aysan maskaxdodu joogin ilaa reerahoodii la xaliyo meel walba ha laga dhawaajiyo si ay iyaguna ay u gaarsiiyaan dowlada oo ay u dhahaan dadkaan cilada heesataa waa reeraha ka maqan waad mahadsantahay jimcaaloow w-w-w-
abdullaho m mohd says:
wa aad ugu farxay waxa ay sameysay gabadha sonalida ah waxaana dhihi lahaa
ghhalagu daydo o wax weyn hala soo saaro si umaddadeena gaajada iyo fakhriga uga saarin